Onye na-emepụta ihe na-ehi ụra | Rayson
Rayson bụ ọrụ ciil opupu ihe ubi, arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a ruo ihe karịrị afọ iri, na Germany, Europe, Europe, Edg.
Na-eji ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta mmiri na ndị ọrụ zuru ezu, ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson nwere ike iche, zụlite, na nwalee ihe niile arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere àkwọ ụgbọ mmiri, kpọọ anyị ozugbo.
Rayson etinyela aka na mmepe mgbe niile, nke nke ihe ndina mmiri bụ nke ọhụrụ. Ọ bụ usoro nke ụlọ ọrụ anyị ọhụụ ma na-atụ anya iju gị anya.